Semalt: Izibonelelo ezi-6 ze-Web Scraping For Business
Ukucoca iWebhu yindlela evumela ukuba sikhiphe idatha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ngokukhawuleza ngendlela efanelekileyo. Oku kunenzuzo yokuqalisa, abathengisi, iingcali zengxelo yoluntu, abaphandi be-intanethi, abafundi, ootitshala, abaprogram, abaphuhlisi, nabangenalo iprogram. Ukukhwa kwewebhu kuqinisekisa ukubonelelwa kwedatha esemgangathweni ngexesha elifutshane.
Iinjongo eziphambili ukutshitshiswa kwewebhu zichazwe ngezantsi.
1. Ixabiso elibi
Ngokungathandabuzekiyo, ukukhwa kwewebhu kuyindlela engabizi yokufumana idatha efundwayo. Inani elikhulu leenkonzo zokuqhawula ziyafumaneka kwi-Intanethi, kubandakanywa ukungenisa. Io, okwenza kube lula ukuba ukhankase idatha kwiimfuno zewebhu ezifunwayo ngaphandle kweendleko. Ngaloo ndlela, ukukhwabanisa kubaluleke kakhulu ukuqala kokuqala kunye nabafundi abangafuni ukuchitha imali eyongezelelweyo kwiinkcukacha zedatha.
2. Ukwazi ukuphumeza nokudibanisa
Xa ukhe ukhetha i-extraction data yakho okanye inkqubo ye-scraping ye-web, unokwandisa ishishini lakho kwaye unokufumana imali eninzi. Oku kungenxa yokuba iinkonzo ze-web kunye nezicelo zilula ukuphumeza kwaye zingadibaniswa nazo zonke iiphequluli zewebhu kunye neenkqubo zokusebenza. Bayakwazi ukuskena kwaye bakhuphe amaphepha ambalwa eblogi yakho okanye yonke indawo ngaphandle kokuphuma.
3. Ukulungiswa okuphantsi okufunekayo kwaye isantya esiphezulu siqinisekisiwe
Siyathokoza, ezininzi iinkqubo zokuqhawula idatha ziye zaziswa ngokude. Zifuna i-low okanye ayikho ukugcinwa kwaye inika idatha echanekileyo kwaye ichaneke kakuhle. I-ParseHub yinkqubo enjalo engafuneki ukugcinwa ixesha elide kwaye ithembisa iziphumo ezinkulu. Iinkonzo ze-Web scraping zingathatha ixesha elifutshane ukuba likhuphe idatha yakho kwaye zibhetele ngakumbi kuneendlela zokukhangela idatha.
I-Web scraping iqinisekisa iziphumo ezichanileyo kunye ezichanekileyo, kwaye kulunge ngakumbi kuneendlela zokucoca. Ezinye zezixhobo zokucoca zewebhu zikhawuleza kwaye zinokuthenjwa. Banikela ngeenkcukacha ezisebenzayo ngemizuzwana kwaye musa ukushiya iimpazamo kwisicatshulwa sakho. Ukukhutshwa okuchanekileyo kwedatha yimfuneko ebalulekileyo yamashishini. Ukuba ujongana namanani okuthengisa okanye iinombolo zendawo yokuhlala, kufuneka ukhethe inkqubo yakho yokucoca i-web okanye isofthiwe ngokuhlakanipha.
5. Kulula ukuhlalutya
Nabani na ongeyenabuchule kunye namava, i-37 (scraping tool) ilula ukuyiqonda kwaye inokuphunyezwa ngokulula. Akudingeki ufunde ezinye iilwimi ezinjengeC ++ okanye i-HTML ukuze uzuze kwiprosoft software. Ngaphezulu, idatha engenzi-mpazamo iyaqinisekiswa, kwaye iimpazamo ezincinane zokupeliswa zikhawuleza, zenze kube lula ukuba uhlalutye amaphepha ewebhu kumgangatho.
6. Gcina ixesha lakho
Ukuba uqala, kufuneka ube nezinto ezininzi zokwenza. Uya kuhlala uxakeke ekuthengiseni nasekukhuthazweni kweshishini lakho kwaye awukwazi ukulondoloza ixesha lokukhutshwa kwedatha yenkcukacha. Ukusebenzisa uhlobo olulungileyo lwezixhobo zokucima, ungalondoloza zombini ixesha lakho namandla. Ngokomzekelo, i-Connotate yinkqubo ecacileyo kwaye imangalisayo yokwehliswa kwewebhu engadingi nayiphi na ikhowudi kwaye inokukhupha inani elikhulu lamakhasi ewebhu kuwe kwiminyaka engamashumi amabini nje. Oku kuyilondolozo lwexesha. Ngohlobo olulungileyo lwezixhobo, unokwenza i-website yonke. Idatha ifumaneka kwiifom ezifundwayo kuphela Source .